စျေးပေါသော Trenitalia ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါသော Trenitalia ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
နေအိမ် > စျေးပေါသော Trenitalia ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါတဲ့ Trenitalia ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် Trenitalia ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် Trenitalia
2. Trenitalia အကြောင်း 3. စျေးပေါသော Trenitalia ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. Trenitalia လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: Trenitalia ကိုယူတာကဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. Standard Economy အကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ, ဆု, Trenitalia တွင်စီးပွားရေးနှင့်အမှုဆောင် 7. Trenitalia ကြေးပေးသွင်းမှုရှိပါသလား
8. Trenitalia ၏မထွက်ခွာမီဘယ်လောက်ကြာမလဲ 9. Trenitalia ရထားအချိန်ဇယားကဘာလဲ
10. Trenitalia မှမည်သည့်ဘူတာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် 11. Trenitalia မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် Trenitalia
Trenitalia ကုမ္ပဏီကိုဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည် 2000.
တွင် 2005, အဆိုပါ Frecciarossa 1000, Trenitalia ၏အမြန်ဆုံးရထားလမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်. Frecciarossa ရဲ့အမြန်နှုန်း 1000 တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀ ကီလိုမီတာသာသွားသည်.
အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားလမ်းသည်ဂျီနီဗာနှင့်မီလန်အကြားရှိသည်4အဆိုပါ Trenitalia ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်နာရီ.
Trenitalia မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသည်မြောက်မှတောင်သို့၊ အရှေ့မှအနောက်သို့အီတလီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, ပြင်သစ်, သြစတြီးယား, နှင့်ဂျာမနီ.
အဆိုပါ trenitalia ရထား မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများပေါ်တွင်တစ်နာရီလျှင် ၃ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်ခရီးသွားလာကြသည်.
ရုံထဲမှာ3သင်သည်မီလန်မှရောမသို့၊ မီလန်မှ Bologna သို့သွားနိုင်သည် 1 နာရီ.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ Trenitalia အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်
– Train iPhone App တစ်ခုသိမ်းပါ
စျေးပေါသော Trenitalia ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ Trenitalia လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာယူပါ
Trenitalia လက်မှတ်တွေ အကြားရရှိနိုင်ပါသည်2သို့4ထွက်ခွာသည့်နေ့၏လပေါင်းများစွာ. Trenitalia လက်မှတ်ကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းကသင့်အားအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသက်သာဆုံးလက်မှတ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်. သင်ခရီးသွားသည့်နေ့နှင့်နီးသည်နှင့်အမျှရထားလက်မှတ်များမှာစျေးနှုန်းတက်သွားသည်, ဒါနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေစုပါ, ကြိုတင်မဲအတွက်တတ်နိုင်သမျှအမိန့်.
ဂဏန်း 2: ထရန့်တီတီယာယာအဝေးပြေးကာလတွင်ခရီးသွားခြင်း
Trenitalia လက်မှတ်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနာရီများအတွင်းစျေးသက်သာသည်, ရက်သတ္တပတ်၏အစမှာ, နှင့်ရက်သတ္တပတ်၏တစ်နေ့တာနှင့်အလယ်တွင်ရထားခရီးစဉ် (အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့) မကြာခဏစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများကိုဆက်ကပ်. အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအတွက်, Trenitalia ရထားများကိုသီတင်းပတ်အတွင်းနံနက်စောစောနှင့်ညနေပိုင်းများတွင်မသွားပါနှင့် (အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်ကြောင့်). ဖြစ်နိုင်လျှင် Trenitalia ရထားကိုသောကြာနှင့်တနင်္ဂနွေညနေများတွင်ရှောင်ပါ (တနင်္ဂနွေ getaways များအတွက်အဆင်သင့်) နှင့်စဉ်အတွင်း အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်လည်းဖြစ်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာ Trenitalia လက်မှတ်တွေရဲ့စျေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးတက်လာတယ်.
ဂဏန်း 3: သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ကိုသေချာစွာသိသည့်အခါ Trenitalia အတွက်သင်၏လက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
Trenitalia ရထားဝန်ဆောင်မှုသည်ဝယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသည်. Trenitalia အခြေစိုက်ရထားလက်မှတ်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲလဲလှယ်နိုင်ပြီးပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ Economy Standard လက်မှတ်ကိုရထားမထွက်ခွာမီတစ်ကြိမ်သာပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။. သင်သည်အခြား Trenitalia လက်မှတ်များကိုလဲလှယ်။ မရပါ, သို့သော်သင်၏ Trenitalia လက်မှတ်ကိုတစ်ပတ်ရစ်ရောင်းချနိုင်သောအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖိုရမ်များရှိသည်. အဘို့အတစ် ဦး ကရထားထောက်ခံချက် Save Trenitalia ခရီးသွား သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားကိုသေချာသည့်အခါစာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်သည်.
ဂဏန်း 4: သင်၏ A Trenitalia လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
Save A Train သည်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရထားလက်မှတ်အများဆုံးဝယ်ယူမှုများရှိသည်, ကျနော်တို့စျေးအသက်သာဆုံး Trenitalia လက်မှတ်တွေကိုရှာပါ. မီးရထားအော်ပရေတာများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ algorithms သည်အခြားရထားလမ်းအော်ပရေတာများ၏ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူအခြားအီတလီရထား Trenitalia လက်မှတ်ကိုအမြဲပေးသည်. Trenitalia ရထားများနှင့်လည်းအခြားနည်းလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်.
Bari မှ Fasano လက်မှတ်တွေ
Taranto မှ Fasano လက်မှတ်တွေ
မီလန်သို့ Florence လက်မှတ်များ
ဥပမာအားဖြင့် Trenitalia လက်မှတ်စျေးနှုန်းများသည်ပရိုမိုးရှင်းကာလတွင်ယူရို ၂၁ မှစတင်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ယူရို ၉၇ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်. Trenitalia လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ သင်ရွေးချယ်သောအတန်းပေါ်မူတည်သည်။ ဤတွင်ရောမ - နေပယ်လ်အတွက်အတန်းအစား၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းများ၏အကျဉ်းချုပ်ဇယားဖြစ်သည် / ရောမမြို့ – မီလန် / မီလန် – ဖလောရင့်ရထားခရီးစဉ်:
စံ 21 € – 70 € 40 € – 130 €
ဆု 42 € – 90 € 78 € – 172 €
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 47 € – 97 € 90 € – 190 €
မီလန်မှ Naples လက်မှတ်တွေ
Florence - Naples လက်မှတ်တွေ
ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: Trenitalia ကိုယူတာကဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ?
1) Trenitalia မီးရထား၏အားသာချက်မှာသင်ထွက်ခွာနိုင်ပြီးသင်သွားသောမည်သည့်မြို့မဆိုရှိမြို့လယ်သို့တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့်စတင်သည်. မုချ, ဒီဟာရထားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်, သငျသညျရောမမွို့မှခရီးသွားလေ့ကျင့်လျှင်အထူးသဖြင့်ပါ, မီလန်, Florence, ဂျီနီဗာ, ဒါမှမဟုတ်မိုနာကို, ၎င်းသည် Trenitalia အတွက်အဓိကအကျိုးရှိသည်. ခရီးစဉ်သည်မြို့လယ်ခေါင်သို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်, သငျသညျယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အားလပ်ရက်အပေါ်အသွားအလာ၌မှီဝဲခံရခြင်းထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးပါပဲ.
Trenitalia ရထားလက်မှတ်တွေရောက်တဲ့အခါ စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်းများအတော်လေးမကြာခဏကွဲပြားလေ့ရှိပါတယ်. တချို့ပရိုမိုးရှင်းတွေကသင့်ကိုစျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထွက်ခွာသွားမတိုင်မီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌, စျေးနှုန်းကမြင့်တက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင်ချောချောမွေ့မွေ့ခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်, Trenitalia သည်သင်တို့အတွက်ဖြစ်သည်!
2) လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းတွင်လေဆိပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနည်းဆုံးဖြစ်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်2သင်၏စီစဉ်ထားသောထွက်ခွာခြင်းမပြုမီနာရီ. Trenitalia နှင့်အတူ, သင်ရုံရောက်လာရန်လိုအပ်သည် 30 ကြိုတင်မိနစ်အနည်းငယ်. လည်း, မြို့လယ်ခေါင်ကနေလေဆိပ်ကိုသွားရတော့မယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျတပြင်လုံးကိုခရီးအချိန်ရေတွက်လျှင်, Trenitalia သည်ခရီးသွားလာချိန်အားလုံးကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ရရှိသည် သင်၏အချိန်ကိုငွေအဖြစ်တွက်ချက်လျှင်စျေးနှုန်းလည်းဖြစ်သည်.
3) တခါတရံတွင် Trenitalia လက်မှတ်ဈေးသည်လေယာဉ်ပျံထက်စျေးနိူင်နှုန်းထက်ပိုများသည်, သို့သော်နှိုင်းယှဉ်ချက်အရမည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုမဆိုလေဆိပ်သို့သင်ပို့ဆောင်ရန်မည်မျှကုန်ကျသည်ကိုထည့်သွင်းသင့်သည်. အပြင်, အချို့ကိစ္စများတွင်, အချိန်ပိုရတယ် Trenitalia ရထားများနှင့်ခရီးသွားလာ နောက်ဆုံး Trenitalia နှင့်အတူ, သင်သေတ္တာအိတ်များမလိုပါဘူး.
4) နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လေယာဉ်ပျံသည်လေထုညစ်ညမ်းမှု၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်အဆင့်တွင်, Trenitalia ရထားများ ပိုပြီးပတ်ပတ်လည်ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, လေယာဉ်ပျံကိုရထားခရီးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်, ရထားခရီးသွားခြင်းသည်လေယာဉ်ထက်ကာဘွန်ညစ်ညမ်းမှု၏ ၂၀ ဆလျော့နည်းသည်.
မီလန်မှ Genoa လက်မှတ်များ
Florence သို့ Genoa လက်မှတ်များ
Standard Economy အကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ, ဆု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, နှင့် Trenitalia အပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်?
Trenitalia သည်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ခရီးသွားအမျိုးအစားအတွက်မဆိုရထားလက်မှတ်လူတန်းစားဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်, မင်းဟာစီးပွားရေးခရီးသွားတစ် ဦး လား, အားလပ်ချိန်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးကို.
Trenitalia မီးရထားလက်မှတ်သင်တန်းများအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာလက်မှတ်ပြုပြင်ခြင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်, စျေးနှုန်းများ, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ. ထို့အပွငျ, စံစီးပွားရေးရထားလက်မှတ်သည်အီတလီသို့သွားရန်အသက်သာဆုံးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်.
စံစီးပွားရေး Trenitalia လက်မှတ်တွေ:
Trenitalia စံစီးပွားရေးရထားလက်မှတ် Trenitalia ဈေးနှုန်းအားလုံးမှာအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်. ဒီရထားလက်မှတ်ကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်တာကအကောင်းဆုံးပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေခံလက်မှတ်တွေကတော့စျေးနည်းပါတယ် – သူတို့မြန်မြန်ရောင်း. ပုံမှန်ရထားလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်ခရီးသည်များသည်ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်ခရီးဆောင်အိတ်များကိုယူနိုင်သည်, အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီသူတို့၏ရထားလက်မှတ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည် (၏နှုတ်ယူခြင်းတာဝန်ခံ 20%).
စီးပွားရေးပရီမီယံ Trenitalia လက်မှတ်များ:
ဒီရထားလက်မှတ်အတန်းဟာ Standard Trenitalia လက်မှတ်အမျိုးအစားထက်ပိုစျေးကြီးသည်, အဆိုပါ စီးပွားရေး Trenitalia ပရီမီယံလက်မှတ် နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း. ဤရထားလက်မှတ်အမျိုးအစားကို Trenitalia မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထွက်ခွာသွားသည့်နေ့မတိုင်မီတစ်ကြိမ်သာအချိန်နှင့်နေ့စွဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
ပုံမှန်ရထားလက်မှတ်၏အားသာချက်များအပြင်, Trenitalia Economy ပရီမီယံလက်မှတ်သည်ထိုင်ခုံနေရာထိုင်ခင်းနှင့်အကွာအဝေးရှည်သောနေရာများတွင်ထိုင်ခုံများပိုကောင်းသည့်ထိုင်ခုံများသာရှိသည်. အားလုံးအထက်, သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအစားအစာမီနူး (၃) ခုရှိပြီးထရီနီတီလီယာရထားပေါ်တွင်သင်၏ထိုင်ခုံတွင်အပေါ့စားသောအစာနှင့်အချိုရည်များကိုထည့်ပေးပါလိမ့်မည်။.
စီးပွားရေး Treintalia လက်မှတ်များ:
အဆိုပါ Trenitalia စီးပွားရေးလက်မှတ် ၀ ယ်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ရေးသားခဲ့သည့်ကောင်းကျိုးအားလုံးကိုခံစားနိုင်သည်, Trenitalia Business Premier မှခရီးသည်များသည်ခရီးဆောင်အိတ်များစွာမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်, အဆင်ပြေ ergonomic သားရေထိုင်ခုံ, တိုးချဲ့ legroom, ကနေရွေးချယ်ဖို့သုံးအစားအစာ menus တွေ. ထို့အပြင်, Trenitalia ရထားပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်နံရံများနှင့်စီးပွားရေးသတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင်တိတ်ဆိတ်စွာရှိနေသောနေရာရှိသည်.
အလုပ်အမှုဆောင် Treintalia လက်မှတ်များ:
အဆိုပါ Trenitalia အလုပ်အမှုဆောင်လက်မှတ် ၀ ယ်ယူသူများသည်ကျယ်ပြန့်эрရေးစီးပွားရေးအရလှပသောသားရေထိုင်ခုံများအပြင် ဦး ခေါင်းကို တင်၍ အီတလီနိုင်ငံ၏ရှုခင်းများကိုသက်တောင့်သက်သာခံစားနိုင်ရန်အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားသာချက်များကိုခံစားနိုင်သည်။.
Trenitalia subscrip ရှိလားမျိုး?
အီတလီအတွက် Pass တစ်ခုရှိတယ်, သင်ခရီးသွားရန်လေ့ကျင့်ရန်အစီအစဉ်ရှိပါကစျေးသက်သာသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်သာအကြံပြုသည် 14 ရက်ပေါင်း, ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့်အထူး Pass များဖြင့်အီတလီကိုရထားဖြင့်ရှာဖွေခွင့်ပြုသည်. ရှိပါတယ်3အဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါ: လွယ်ကူသော, သက်သာခြင်း, နှင့် Executive နှင့်သင်ကနေအထိကြောင်းခရီးအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်3သို့ 10 အမြန်နှုန်းမြန် Frecce မှသည် intercity နှင့် EuroCity အထိရထားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ.
Pass ကိုစက္ကူပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် 11 ဝယ်ယူသည့်နေ့မှလ.
သင်၏ Trenitalia ရထားနှင့်အချိန်မှန်ရောက်ရန်, အနည်းဆုံးရောက်ရှိရန်ရထားလမ်းကအကြံပြုသည် 30 သင့်ရထားမထွက်ခွာမီမိနစ်ပိုင်း. အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Save A Train တွင်ရှိသည်, အချိန်အလုံအလောက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီးသင်ဆိုင်များကိုလည်းပျော်ရွှင်နိုင်ပြီးသင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုလည်းရနိုင်သည် တတ်နိုင်သမျှချောမွေ့ဖြစ်ရထားခရီး.
၎င်းသည်ခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Save A Train သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေဆိုနိုင်သည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်. အသေးစိတ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပါ, သင်၏မူရင်းနှင့်အီတလီနိုင်ငံရှိသင့် ဦး တည်ရာကိုရိုက်ပါ, သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်သောရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Trenitalia ရထားအချိန်ဇယား ရှိပါတယ်. ထရီနီတီယာယာရထားများသည်စောစောပိုင်းတွင်ပြေးဆွဲသည်6နံနက်မှ 11 ညနေခင်းတွင်မီလန်မှ Bologna သို့, Trenitalia ရထားအများစုကိုရှင်းလင်းရန်နာရီဝက်သို့မဟုတ်နာရီဝက်ခန့်ရထားဖြင့်ထွက်ခွာမည့်ရထားနှင့်အတူညနေနှောင်းပိုင်းအထိပြေးသည်.
Trenitalia မှမည်သည့်ဘူတာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်?
Trenitalia သည်အီတလီနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်, သို့သော်, အဓိကအမျိုးသားဘူတာမီလန်ဖြစ်ကြသည်, ရောမမြို့, ဗင်းနစ်, Naples, တူရင်, Bologna, ဂျီနီဗာ, Florence, နှင့် Verona. ရှိပါတယ် 11 နိုင်ငံတကာဘူတာ:5Trenitalia ရထားဘူတာသည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်6ပြင်သစ်ရှိဘူတာရုံများနှင့်သြစတြီးယား၊ ဂျာမနီ၊. ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ဟာလှပသောဥရောပကိုဖြတ်ပြီးအဆင်ပြေစွာနဲ့လျင်မြန်စွာခရီးသွားနိုင်ပြီးဘာတစ်ခုမှမပျောက်ဘဲအီတလီအမြင်ကိုလေးစားမိပါလိမ့်မယ်!
မီလန်ရှိဘူတာရုံသည်အလုပ်အများဆုံးတွင်တည်ရှိသည် Piazza Duca d'Aosta. ရထားဘူတာသည်ဗိသုကာအရအထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးမိုးမျှော်တိုက်များဝိုင်းရံထားသည်. ဒါကြောင့်သင် Trenitalia ရထားပေါ်တက်ဖို့စောင့်နေစဉ်သင်လှည့်ပတ်သွားလာရပြီးအံ့ဖွယ်ပန်းပုရုပ်တွေကိုလေးစားမိပါတယ်.
ရောမမြို့ Termini ဥရောပရှိအကြီးဆုံးမီးရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်. ရှေးဟောင်းရောမမြို့ရှိ Diocletian ၏ရေချိုးကန်များနှင့်တစ်ထပ်တည်းကျသည်. ဆိပ်ကမ်းတံခါးပေါက်သည် Piazza dei Cinquecento မှဖြစ်သည်. ရှိပါတယ် 29 terminal ကိုနှင့် Trenitalia ရဲ့မီးရထားလက်မှတ်ရုံးခန်းဟာဘူတာရုံရဲ့ lob ည့်ခန်းထဲမှာပဲ.
Florence ဘူတာရုံ, စန်တာမာရီယာ Novella, Duomo နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် Florence မြို့၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုများဖြစ်သည်. ဒီဘူတာရုံကို Santa Maria Novella ဘုရားကျောင်းရဲ့ ၀ င်ပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးအမည်ပေးခဲ့သည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျအလွယ်တကူမြို့ဟောင်း၌အနည်းငယ်ပိုပြီးလှပသောအချိန်လေးခိုးယူနိုင်ဘူး, သင်၏အပေါ်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ အီတလီမှာလာမယ့်စွန့်စားမှု.
နေပယ်လ်ဆိပ်ကမ်း ဟောငျးမြို့အရှေ့၏ဖြစ်ပါတယ်. သင်အချို့လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် နေပယ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ် Pompeii သို့မဟုတ် Sorrento ရန်, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ရထားခရီးစဉ်အတွက်နေပယ်ရထားဘူတာတွင်stopကန်အမှန်ရပ်နားလိမ့်မည်.
သင်လည်ပတ်နေသည့်မြို့အတွင်းမည်သည့်ရထားဘူတာကိုရွေးချယ်မည်ကိုမသေချာပါက, ငါတို့ site ပေါ်တွင်မြို့ကြီးများ၏အများစုအတွက် Stations All များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါတို့ algorithm ကသင့်ထံမှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ရောက်လာရန်သင့်လျော်သောဘူတာရုံကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်ုပ် Trenitalia သို့ဘာတွေယူဆောင်လာသင့်ပါသလဲ?
ထိုနည်းတူစွာအရေးကြီးသည်မှာမိမိကိုယ်ကို Trenitalia ခရီးစဉ်သို့ရောက်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ထိပ်ဖျားတွင်သင်၏ Trenitalia ခရီးသွားလာရေးစာရွက်စာတမ်းကိုသင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထားရန်သေချာအောင်လုပ်ထားပါ။ အမြဲတမ်းခရီးသွားအာမခံရှိသည်.
Trenitalia ကိုအီတလီအစိုးရမှပိုင်ဆိုင်ပြီး FS Italiane Group ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်.
Trenitalia Trenitalia ကိုဘယ်မှာသွားရမလဲမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ?
ဒေသဆိုင်ရာ, မြို့ပြနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, Trenitalia ရထားများသည်သင့်အားအီတလီရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနှင့်အီတလီနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်. ဥပမာ, Trenitalia မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်သင်ပြင်သစ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်သို့သွားနိုင်သည်.
ရထားလက်မှတ်တွေကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပြီး Trenitalia ကိုတက်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူဘူး. သင်၏ Trenitalia လက်မှတ်ကိုအွန်လိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်မိနစ်နှင့်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည် 1 ရထားမထွက်ခွာမီတစ်နာရီ. ဘော်ဒါများအတွက်, သင်လိုအပ်သမျှသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်ပြီး PNR ကုဒ်ကိုတင်ပြရန်လည်းလိုအပ်သည် (6-ဂဏန်းကုဒ်). ရှင်းလင်းဖို့, PNR ကုဒ်သည် e-လက်မှတ်နှင့်အတူဘွတ်ကင်အတည်ပြုအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သည်. ရထားလက်မှတ်ကိုသင်ကြိုတင်ပုံနှိပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်၏မိုဘိုင်းလ်တွင်ရရှိနိုင်ပြီးအတည်ပြုအီးမေးလ်တွင်ပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ထို့အပြင်ရထားထိန်းချုပ်သူသည်သင်၏လက်မှတ်အားသင်၏လက်မှတ်အားအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင်လည်းအတည်ပြုနိုင်သည်.
Trenitalia တွင်ဘာ ၀ န်ဆောင်မှုများ?
Trenitalia ရထားများတွင်အချိုရည်များနှင့်အစားအစာများကိုအထူးရည်ညွှန်းထားသောအထူးရထားပေါ်တွင်ကဖေးဆိုင်ရှိသည်. မီနူးတွင်အသားညှပ်ပေါင်ပါဝင်သည်, ချောကလက်ချစ်, မုန်, ချောကလက်အရက်ဆိုင်, ကော်ဖီ, ချောကလက်အပူ, လက်ဖက်ရည်သောက်လိုက်ရင်ဒီစားသောက်ဆိုင်မီးရထားကားထဲမှာစားသောက်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဝယ်လိုက်တာကိုမင်းထိုင်ခုံဆီပြန်ယူသွားပါ. သငျသညျစီးပွားရေးအတွက်ခရီးသွားလျှင်, ဆု, သို့မဟုတ်ပထမတန်းစားကိုသင်ရွေးစရာတစ်ခုမှအခမဲ့ကြိုဆိုသောသောက်စရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်9ရရှိနိုင်သောက်စရာများနှင့်ချိုမြိန်, savory, သို့မဟုတ် gluten- အခမဲ့မုန်. Trenitalia ရထားအားလုံးမှာ, မင်းရဲ့ထိုင်ခုံဘေးမှာ power slot တွေရှိတယ်.
အများဆုံးတောင်းဆိုထားသော Trenitalia မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – Trenitalia တွင်ထိုင်ခုံကြိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
သင် Trenitalia လက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူသောအခါ, သင်ထိုင်ခုံကိုအလိုအလျောက်ခွဲဝေပေးပြီးသင်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အခါသင်အထူးထိုင်ခုံကြိုတင်မှာထားလို့မရပါ. ရထားပေါ်မှာထိုင်ခုံလွတ်ရင်, မင်းပတ်ပတ်လည်ကိုသွားခွင့်ပေးတယ်, နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းပါ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအာကာသရှိသည်.
သင်၏ Trenitalia လက်မှတ်များကိုကြိုတင်ဝယ်ယူသောအခါ, သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် အခမဲ့ WiFi အင်တာနက် Trenitalia frecciarossa အမျိုးအစားရထားများနှင့်အတန်းများအားလုံးတွင်.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, သင်ဤဝေးရောက်ရှိလျှင်, သင် Trenitalia ရထားတွေအကြောင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုသိပြီးသင်၏ Trenitalia မီးရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ရှိသည် SaveATrain.com.
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.